२०७७ मङ्सिर २३ मंगलबार १०:३८:००
संगीतकर्मी भन्छन्– म्युजिक भिडियोमा लागत बढ्दा युट्युबकै भर पर्नुपर्ने नेपाली गीतमध्ये ९० प्रतिशत लगानी उठाउन असफल
म्युजिक भिडियोमा महँगो पारिश्रमिक लिने मोडेलहरूमा पर्छन्, पल शाह, वर्षा राउत, केकी अधिकारी, पुष्प खड्का, आकाश श्रेष्ठलगायत । सांगीतिक क्षेत्रमा हुने गरेका चर्चालाई आधार मान्ने हो भने यी कलाकार एक लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक लिनेमा पर्छन् । यसमा सत्यता पनि रहेको म्युजिक भिडियो निर्देशक तथा पत्रकार रघु सापकोटा बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक लाख त सामान्य भइसक्यो अहिले । दर्जनभन्दा बढी कलाकारले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिने गर्छन् ।’
कलाकारको पारिश्रमिककै कारण सामान्य म्युजिक भिडियोमा पनि लगानी ५–६ लाख हुने गर्छ । पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोको लागत १५–२० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेका छन् । हालै रिलिज भएको सत्यराज–स्वरूप आचार्यको ‘मैसाबले घाइते दिलमा आरा...’ बोलको म्युजिक भिडियोको बजेट १४ लाख पुगेको चर्चा छ । यसमा म्युजिक भिडियो निर्माणदेखि बुस्टसम्मको खर्च जोडिने गर्छ । तर, यत्तिका धेरै लगानी गरेर तयार भएको म्युजिक भिडियोले कमाउँछ चाहिँ कति ?
डिजिटल बजारको रूपमा एक सय ५२ वटाभन्दा बढी प्लेटफर्म भए पनि नेपाली संगीतका लागि युट्युब नै मुख्य हो । तर, युट्युबकै भर पर्नुपर्ने नेपाली गीतहरूमध्ये ९० प्रतिशत गीतले लगानी उठाउन नसक्ने बताउँछन्, संगीतकार वसन्त सापकोटा । धेरै गीत लगानी उठाउन नसकेर टाट पल्टिने गरेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘यति रुपैयाँ खर्च गरेँ, यति उठ्ला भनेर लगानीकर्ताले सोचेको हुन्छ । तर, सोचेको कुरा वास्तविकतामा आइपुग्दा पूरा हुँदैन ।’
कलाकारको महँगो पारिश्रमिकले पनि लगानी बढाइदिएकाले म्युजिक भिडियोलाई युट्युबमार्फत लगानी उठाउन गाह्रो हुने गर्छ । कलाकारको पारिश्रमिकमा कुनै नियम छैन । जति पनि भनिदिन सक्ने संगीतकर्मीहरू बताउँछन् । त्यसले लामो समयदेखि नेपालमै रहेर व्यावसायिक संगीत सिर्जना गरिरहेका सर्जकहरू मारमा परेको पनि देखिन्छ ।
तर, कलाकारहरू आवश्यकताभन्दा बढी पारिश्रमिक किन लिन्छन् ? ‘मेरो कमाउने वेला यही हो । यही वेला कमाइसक्नुपर्छ । भोलि के होला होला भन्ने सोच्छन्,’ सापकोटा सुनाउँछन्, ‘यस्ता मान्छेका कारण पनि पारिश्रमिक न्यायसंगत नभएको हो । जसको मारमा हामीजस्ता संगीतकर्मी पर्छौं ।’
महँगो लागतका म्युजिक भिडियोहरू खास संगीतकार, गीतकार या गायक÷गायिकाले नबनाउने मत छ, गायक शिव परियारको । निरन्तर संगीतमा काम गर्छु भनेर आएकाहरूले त्यसरी हावामा पैसा पनि नफाल्ने बताउँछन् । साथै, आफूहरूले त्यसरी खर्च गर्न पनि नसक्ने धारणा राख्छन्, गायक परियार ।
उसो भए कसले गर्छन् त त्यति धेरै खर्च ? ‘पाँच लाखको ठाउँमा दश लाख, पन्ध्र लाख लगानी गरिदिने आइदिन्छन् । अनि भ्युज किनेर आत्मरतिमा रमाउनेहरू पनि हुन्छन् । यस्तो लगानी रहरेहरूको हो,’ परियार भन्छन्, ‘संगीतमै लागेका संगीतकर्मीले अस्वाभाविक खर्च गरेका छैनन् । पहिला नेपाली फिल्ममा मुर्गा फसाउने कुरो हुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै संगीतमा पनि त्यही देखिएको छ ।’
गायक खेम सेन्चुरी आफ्नो गीत ‘सोचेझैँ जिन्दगी रै’नछ’ बोलको गीतबाट युट्युबबाटै नाफा कमाएको बताउँछन् । सेन्चुरी मात्र होइन, केही संगीतकर्मीले कमाएका पनि छन् । तर, त्यस्तो संख्या न्यून छ । अधिकांश त डुबेका छन् । प्रायः लगानी बढी गरेर डुबेका छन् । जसको मुख्य हिस्सा कलाकारको पारिश्रमिकमै जाने गर्छ ।
पारिश्रमिक महँगो हुनुमा कति लिने, कति दिने भनेर ठ्याक्क मापदण्ड नभएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्, सेन्चुरी । कसलाई र कुन मोडललाई खेलाउने भन्ने कुरा व्यक्तिगत छनोटको कुरा भए पनि कति पारिश्रमिक दिने या लिने भनेर मापदण्ड भएदेखि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘सिस्टम छैन, नियम कानुन छैन ।
सबैको मनोमानी छ,’ सेन्चुरी सुनाउँछन्, ‘यसलाई एउटा नीति नियमभित्र राख्न सके गज्जबै हुने थियो । तर, कति पारिश्रमिक दिने या लिने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको कुरा पनि हो । लगानीकर्तालाई रिटर्नको चिन्ता छैन, नाम मात्र चाहिएको छ भने उसको स्वनिर्णयको कुरा पनि हो ।’
चलचित्र एवं म्युजिक भिडियो निर्देशक सुव्रतराज आचार्य अधिकांश लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता होस् भन्ने अभिप्रायका साथ लगानी नगर्ने बताउँछन् । तर, भर त युट्युबकै छ । कोभिडका कारण कन्सर्ट, महोत्सव छैनन् । युट्युबबाहेक विकल्प छैन । तर, युट्युबमै लगानी झ्वाम्म भइरहेका छन् । जसको एउटा कारण कलाकारको पारिश्रमिक भन्ने मतमा सबै संगीतकर्मी सहमत छन् ।
निर्देशक आचार्य ०५५/५६ सालतिर पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँमा म्युजिक भिडियो बनाउँथे । अहिले आएर सामान्य म्युजिक भिडियोको लागत ५–६ लाख पुगेको छ । यसरी ह्वात्तै बढ्नुमा पारिश्रमिकलगायत यावत् कुरालाई नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएर पनि हो भन्ने बुझाइ छ, आचार्यको । ‘यसका साथै बुस्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यहाँ पनि खर्च गर्नैपर्छ ।
पारिश्रमिक माग्नेले जति पनि मागिदिने, दिने पनि जति पनि दिने गर्छन् । कलाकारले जति मागोस्, लगानीकर्तालाई समस्या हुँदैन,’ आचार्य सुनाउँछन्, ‘यस्ता लगानीकर्ताले सबै बिगारेका छन् । एकजनाले गर्दा अरूलाई मारमा पारेका छन् । त्यसकारण पनि नियामक निकाय चाहिने देखिन्छ ।’
समस्या यति मात्र होइन । अनेक कारणले गर्दा निरन्तर काम गरिरहेका संगीतकर्मीहरू मारमा परिरहेका छन् । कार्टुन क्रु युट्युब च्यानल म्युजिक भिडियो धेरै सार्वजनिक हुने च्यानलमध्ये एक हो । यहाँ धेरै म्युजिक भिडियोको लाखौँ भ्युज गएका छन् । तर, गायक, संगीतकारभन्दा ज्यादा नाच्नेहरूलाई दर्शकले चिन्छन् ।
गायक, गीतकार, संगीतकार छायामा परेका हुन्छन् । कति गीत छन्, जुन गीतलाई कार्टुन क्रुको भनेर दर्शकले भनिदिन्छन् । दर्शकले यो हिसाबले हेरिदिएकाले पनि कलाकारले महँगो पारिश्रमिक माग्ने गरेको संगीतकार सापकोटाको बुझाइ छ । ‘पहिला पनि संगीतकार या गीतकारलाई खासै चिनिँदैन थियो । तर, अहिले त गायक तथा गायिका पनि चिनिन छाडे ।
फलानो मोडलको गीत, फलानो समूहको गीत भनेर भनिन्छ,’ सापकोटा सुनाउँछन्, ‘यसले असली स्रष्टाप्रति त अन्याय हुन्छ नै । साथै, मोडलहरूको मूल्य बढाइदिन्छ । जसको मारमा हामीजस्ता संगीतकर्मी पर्छौं । विदेशमा बसेर लगानी गर्नेहरूलाई त केको डर ?’
अहिले युट्युबमार्फत लगानी फिर्ता हुने सम्भावना जसरी कम हुँदै गएको छ, त्यसको कारक लगानी नै हो भन्ने मत सबैको छ । तर, लगानी कसको हो ? विदेशमा बसेर रहर गर्ने, नामको लोभ गर्नेहरूको लगानी भएको र कलाकारले जति माग्छन्, त्यति तिर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताउँछन् सापकोटा । भन्छन्, ‘उनीहरूलाई लगानी उठोस् भन्ने चाहना हुँदैन । नाम भए पुग्छ । उनीहरूकै कारण एउटा म्युजिक भिडियो त्यति महँगो बन्न पुग्छ ।’ यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशक आचार्यले भनेझैँ नियामक निकाय चाहिने सापकोटाको पनि मत छ ।